राती श्रीमान-श्रीमती कराएको आवाज सुनिएको थियो, विहान यस्तो दृष्य देखियो..? – Taja Khawar
राती श्रीमान-श्रीमती कराएको आवाज सुनिएको थियो, विहान यस्तो दृष्य देखियो..?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ ३१, २०७८ समय: १९:०३:५५
July 15, 2021 11
झापाको गौरादहको एक घरमा राती श्रीमान श्रीमतीबीच वि,वा,द भएको आवाज छिमेकीले सुनेका थिए । तर विहान सो घरमा महिलाको श,व फेला परेको छ भने पुरुष स,म्प,र्क वि,हि,न भएका छन् । घरमा श,व देखेपछि स्थानियले प्रहरीलाई खबर गरेका छन् ।
गौरादह वडा नम्बर-१ गेउरिया चोककी ३९ वर्षीया संगीता टुडुको श,व उनको घरमै भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राकेश थापाले बताए। अघिल्लो दिन राती श्रीमान श्रीमतीबीच वि,वा,द भएको आवाज सुनिएको स्थानियले बताएका छन् ।
संगीताका महिलाका श्रीमान फ रा र रहेकाले प्रहरीले खो,जी कार्य अघि बढाएको छ। श्रीमान श्रीमती दुवैले र, x क्सी से,व,न गर्ने भएकाले यस्तो वि,वा,द प्राय भइरहने पनि छिमेकीले बताएका छन् । घरयासी विषयलाई वि,वा,द भइरहने भएकाले छिमेकीले पनि सामान्य ठानेका थिए ।
दुवै जनाबीच हा, x त हा, x ला हा, x ल समेत भएको प्रहरी अनुसन्धानवाट खुलेको छ । हात हाला हालमै श्रीमतीको नि, ध, न भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको प्रहरीले जनाएको छ।
Last Updated on: July 15th, 2021 at 7:03 pm